*Speak from My Heart*: June 2011
စလေဦးပုည (အပိုင်း ၃၊ ဇာတ်သိမ်း)
အမျိုးသားတက္ကသိုလ်၊ ရာဇဝင်နှင့် မြန်မာစာပြဆရာ ဦးသက်တင်က အကိုအကားတို့ နှင့် တကွ တင်ပြသော ဦးပုည မသေကြောင်း ဖော်ပြချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
အတိုချုပ်မှာ ဦးသာအိုးက ၁၂၂၈-ခု ။ သီတင်ကျွတ်လဆုတ်၊ ၁၃-ရက်နေ့ ည သန်ခေါင်ကျော်တွင် အီကင်း ရေဆိပ်သို့ချ၍သတ်စေ၏။ ထို အစီအစဉ်ကို ကြိုသိတင်သိ၍ ကယ်ဆယ်ရန်ကြံသူတို့ မှာ ဦးသာအိုး၏ မယာငယ် ခင်သုံ၊ ၄င်းအမ ခင်မှုံ နှင့် ခင်ပွန်း ကိုသူရ၊ ဦးပုညကို ကြည်ညိုရင်းစွဲး ရှိသော ပုသိမ်မြို့ ပွဲးစားကြီး ဦးညို (ထိုစဉ်က ကုန်ကူးရင်း မန္တလေးတွင် ရောက်ရှိနေသည်။) တို့ (၄)ဦးက ကယ်ခဲ့သည်။ ကယ်ပုံမှာ ဦးညိုက ငွေစိုက်၍ သူသတ်ဆိုင်ရာမှ လူတို့ နှင့် ကြိတ်နယ် တိုင်ပင်ကာ ရေချမည့် နေရာတွင် ပိုက်ကွန်ဖြန့် ခံထားပြီး ဦးပုည အသက်ကို ကယ်လိုက်ကြသည်။
ကယ်ပြီးနောက် ဦးပုည အပါအဝင် (၅)ဦးပေါင်း တိုင်ပင်လျက် `ဦးပုည` ကို ရှမ်းပြည်ကဖြတ်၍၊ သံလွင်မြစ်ကြောင်းစုန်ပြီး၊ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်း (ထိုစဉ်က အင်္ဂလိပ်လက်အောက် ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။) မော်လမြိုင်မြို့ သို့ကိုသူရက ခေါ်လာခါ ဦးညို၏အမ- ဒေါ်နှင်းရီ နှင့် ခင်ပွန်း ဦးဂွယ်တို့အိမ်တွင် ပုန်းအောင် တည်းခိုနေလေသည်။ မော်လမြိုင်တွင် ၁၂၃၆-ခုထိ (၈)နှစ်ကြာ ပုန်းအောင်းနေပြီးမှ အထက်အရပ်မှ သတင်းကြားသိ၍ မလုံခြုံဟုထင်သောကြောင့် ကရင်နီနယ်သို့ပြောင်းရွှေ့ ပုန်းအောင်းရာတွင် ၁၂၃၇-ခုတွင် ဖျားနာ၍ အနိစ္စရောက်(ကွယ်လွန်)လေသည်။
ဦးပုညသည် မန္တလေးမြို့ မှ အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ပြီး ၁၂၂၈-ခု၊ ပြာသိုလဆန်း ၉-ရက်(တနင်္ဂနွေနေ့ ) က ဦးညိုအား ရေးစပ်ပေးသည့် တေးထပ်မှာ၊ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(မှတ်တမ်း အဖြစ်သာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ဦးညိုမှ ဒေါ်ကျော့ကို ဖွားသည်၊ ၄င်းမှ ဦးဖိုးသောင်ကို ဖွားသည်။ ၄င်းမှ ယခု ဦးသက်တင်ကို ဖွားသည်။ ၄င်းအားဖြင့် အဖေး-ဦးညို၏ မှတ်တမ်း စာအုပ်များ၊ စလေဦးပုညကိုယ်တိုင်၏ မှတ်စုစာအုပ်၊ မှတ်တမ်း ပုရပိုက်တို့ ကို စဉ်ဆက်ထိန်းသိန်းရာမှ ဆရာဦးသက်တင်က ရရှိထားခဲ့လေသည်။ (နောက်မျိုးဆက်ကိုတော့ ဆက်၍ မသိရှိပါ။)
(အောက်ပါ အကြောင်းအရာတို့ ကို ဦးမင်းဒင်၏ Site မှ ကိုးကားရေးသား ဖော်ပြပါသည်။)
ဘိုးဝဇီရ အတ္ထုပ်ပတ္ထိ စာအုပ်တွင်
ဘိုးဝဇီရသည် ဦးသာအိုး၏ သားဖြစ်သူ မောင်မောင်လေးအား ပညာသင်ကြားပေးရသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ဦးသာအိုးနှင့် ခင်မင်ပြီး၊ ဦးသာအိုးကို ` စလေဆရာဦးပုညကို ကွပ်မျက်သလား` ဟု မေးမြန်ဘူးလေသည်။ ထိုအခါ ဦးသာအိုးက ` သူကံမကောင်းလို့စွပ်စွဲခံရပါသည်။ မြို့ ဝန်လည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်က တပယ်မင်းသား အမိန့် ဖြင့် လက်မရွံ့ တို့သတ်တာပါ။ မင်းတရားကြီး မကျေနပ်မှန်း သိသဖြင့် သူ့ အပေါ်လွှဲချတာသာဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားပါလို့ လည်း မစွပ်စွဲဝံ့လို့သည်အတိုင်းနေရတာပါပဲ` လို့ ဖြေခဲ့ကြောင်း ပါရှိခဲ့သည် ဆိုပါတယ်။
တပယ်မင်းသားသည် တေးကဗျာ ဝါသနာပါ၍ အတီးအမှုတ်တတ်လေသည်။ သီချင်းကြီး၊ သီချင်းခန့် လည်း စုဆောင်းတတ်သည်ဟု ပညာရှိ ရွှေပြည် ဦးဘတင်၏ အမှတ်အသားရှိသည်။ ကဗျာစာဆိုများကိုလည်း တေးကဗျာ ရေးခိုင်းတတ်သော အလေ့ရှိ၏။ ထိုကြောင့် စာဆိုစလေဦးပုညအား တေးကဗျာရေးခိုင်းရာမှ စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်နှင့် ကြုံရပုံကို နယ်ပိုင်ဝန်ထောက် ဦးမောင်မောင်တင် (K.S.M. , A.T.M) ၏ ` ဦးပုညသမိုင်း` စာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
တပယ်မင်းသားသည် တေးကဗျာရေးခိုင်းရန် အတွက် လူပျိုတော်တစ်ဦးကို စေလွှတ်၍ ဦးပုညအား အခေါ်ခိုင်းလေသည်။ ဦးပုညမှာလည်း အခြားမင်းသားတွေက တေးကဗျာ ရေးခိုင်းထားသဖြင့် မအားဘဲရှိလေသည်။ ထို့ ကြောင့် အလုပ်ပြီးမှ လာနိုင်မည့် အကြောင်းကို ပြန်လျှောက်ခိုင်းလေသည်။ နောက်တစ်နေ့ တွင်လည်း အခေါ်လွှတ်လေရာ မအားလပ်သဖြင့် ဦးပုညက စိတ်ရူတ်ရူတ်ဖြင့်
` မင်းသား အစစ်တွေခိုင်းတာကို ရေးနေရတယ်။ ယမနေမင်းသား ခေါ်တာကို မလာနိုင်အားသေးဘူး။ သည်ကပြီးမှ လာနိုင်ပါမယ့်အကြောင်းကို လျှောက်ထားလိုက်ပါ` ဟု မချေမငံ ပြန်ပြောခဲ့လေသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ရုပ်သေးရုပ်ကို ယမနေသားနှင့် ထုလုပ်မြဲ ဖြစ်သည်။ ရုပ်သေးမင်းသားဟု တပယ်မင်းသားအား ပြောဆိုခြင်းမှာ မင်းသားအစစ် မဟုပ်ဟု ဆိုလိုသည် ဆို၏။ မင်းတုံးမင်း၏ မိထွေးတော်မှ ပါသောသားဖြစ်သည်။( လေးဗိုလ် ဦးဆိုင်နှင့် မင်းတုံးမင်းမိထွေး အလ္လကပ်ပမြိုးစား တို့မှမွေးပြီး ၊ မင်းသွေးမဟုပ်ပေ။) မင်းတုံးမင်းသည် မိထွေးတော်ကို နေရာပေး၍ ၊ သူ့ သားကိုလည်း မင်းသား အရာပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။)
တပယ်မင်းသား သတ်ကြောင်းကို ` ဘိုးဝဇီရ အတ္ထုပ်ပတ္ထိစာအုပ်` နှင့်` ဦပုည သမိုင်း` စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ကိုးကား၍ ၄င်း၊ ၁၈၇၆-ခုနှစ်လောက်တွင် ဗြိတိသျှပိုင် အောက်မြန်မာပြည်သို့စိန်ဂျွန်း(ဆရာမတ်) ကျောင်းတွင် ဆရာအဖြစ်၎င်း၊ သတင်းထောက်အဖြစ်၎င်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လာရောက်ခဲ့သည့် ဂျိမ်းဂျော့စကော့ သည် ၁၈၈၂-ခုနှစ် သီပေါမင်း လက်ထက်တွင်ကား သူ့ အတွေ့အကြုံများကို စုစည်းလျက် `ရွှေရိုး` ကလောင် အမည်ခံ၍ The Burma, His Life and Notions အမည်ဖြင့် နှစ်တွဲပေါင်းစာအုပ်ကို ရေးထုတ်ခဲ့သည်။
Oo Hpo Nyah is the most celebrated recent auther. He was killed in the late King’s reign by the Tabe Mintha. (ဦးပုည သည် နာမည် အကြီးဆုံး ခေတ်ပေါ်စာရေးဆရာ ဖြစ်သည်။ သူ့ ကို ယခင်မင်းလက်ထက်တွင် တပယ်မင်းသားက အဆုံးစီရင်ခဲ့လေသည်။)
ရည်ညွှန်းကိုးကား ထားသော စာအုပ်များကို http://www.mindin.info/2011/03/blog-post.html တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှူ့ နိုင်ပါသည်။
ဦးပုည၏ ပုံစံသွင်ပြင်မှာ မနိမ့်မမြင့်၊ အရပ်ပြတ်ပြတ်၊ အသားလတ်၏။ လက်ယာလက်မှာ လက်မောင်းရင်းကစ သေးသိမ်နေသည်ကို လူမမြင်စေရန် ပုဆိုးစကို ယာဖက်ပခုံးစွန်း၌ အမြဲတင်ထားလေ့ရှိသည်။ ၄င်းပုဆိုးစသည် ချိတ်တွယ်ထားခြင်း မရှိပဲ မြဲမြံစွာနေသည်။
ကွမ်းစားသောအခါ ကွမ်းရွက်ကို ပုဆိုးတွင်းမှ လက်ယာလက်မ၊ လက်ညိုး နှစ်ချောင်းဖြင့် ညုပ်ထားပြီး၊ လက်ဝဲလက်ဖြင့် ထုံးသုပ်ခြင်း၊ ကွမ်းသီးညှပ်ခြင်း၊ ထည့်ခြင်းပြု၍ ၊ လက်ဝဲလက်ဖြင့် စားလေ့ရှိသည်။
ပုဝါကို ပေါင်းသောအခါ၊ လက်ယာဘက်မသန်သော်လည်း လူကြီးပေါင်း၊ အုပ်ပေါင်း ကောင်းမွန် သပ်ယပ်သည့်ပြင် အလွန်လျှင်မြန်သဖြင့် အံဩဖွယ်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
စာရေးသောအခါ လက်ဝဲလက်ဖြင့် ရေးရသည် ဖြစ်သဖြင့်၊ ပုရပိုက်ကို ထောင်လိုက်ထားကာ ရေးချလေ့ရှိသည်။အလွန်လျှင်မြန်သည့်အပြင် လက်ရေးလက်သားကောင်းလှသည်။
၁။ ဗဟန်းဘွဲ့ ၊ ကန်တော်ကြီးဘွဲ့တောလား၊
၂။ မင်းကြီးဦးပွား၏ ရေစက်သွန်း ဆုတောင်း မော်ကွန်းစာ၊
၃။ တရားဟောစာ၊ ဝတ္ထု ၂၆-ပုတ် ၊
၄။ မေတ္တာစာ ပုဒ်ရေ ၅၀-ခန့် 
၅။ ဟောကိန်းရကန်များ။ ၄င်းရကန်များတွင်၊ သစ်လဲကြန်၇ကန်၊ မြေခံရကန်များ၊ နဂါးလှည့်ဟောရကန်၊ အဋ္ဌလက်ဟောရကန် တို့ပါဝင်သည်။
၆။ သင်္ဂြိုဟ်ကိုးပိုင်းသရုပ် တေးထပ်များ။
၇။ ဗြို့ ဟဇ်ကျမ်းလာ ဇာတာယုဂ်ပေါင်း ၁၅၀-ကို တေးထပ်ဖြင့် ပြီးအောင်ရေးသော ဟောကိန်း တေးထပ်များ။
၈။ ဇာတာဘွဲ့ လေးချိုး။
၉။ သက်ရောက်ဂြိုဟ်စားဟော တေးထပ်များ။
၁၀။ မယ်ဘွဲ့ ၊ မောင်ဘွဲ့ ၊ တောဘွဲ့ ၊ တောင်ဘွဲ့ ၊ ကိုယ်ရည်သွေးမှ စ၍ များပြားလှစွာသော တေးထပ်များ၊ ရှစ်ဆယ်ပေါ်တေးထပ်များ၊ ပေါင်း ၂၀၀-ကျော် တွေ့ မှတ်ရသည်။ (သူများမှတ်ထားတာ ပြောတာပါ။)
၁၁။ ဆေးကျမ်း လင်္ကာများ။
၁၂။ ဆေးနည်း လက်ာ ကဗျာများ။
၁၃။ သဒ္ဒါပုဒ်စစ် လင်္ကာ ကဗျာများ။
၁၄။ ပင့်ရစ် ဂဏ္ဌိသတ်ပုံလင်္ကာ ၁၄-ပိုဒ်
၁၅။ သက္ကဋဘာသာ ဖတ်နည်းလင်္ကာ။
၁၆။ ပုဂံတွင်နေစဉ်ရေးသော၊ ပိဋကတ်ဖက် ဆိုင်ရာ-သဒ္ဒါဂန္ထရ နိသျ နံပျောက်ဆောင်များ၊ (နိသျနံ ပျောက်ဆိုသည်မှာ၊ အရိုးအတိုင်း ပါဌ် ပါဋ္ဌိကို ရေးထားပြီးလျှင်၊ အနက်ခက်သော ပါဋ္ဌိစကားလုံးတို့၏ အထက်က၊ မြန်မာအနက်ကို ဆင့်၍ ရေးမှတ်ထားခြင်းကို ဆိုသည်။)
၁၈။ ရတနာနဒီဘွဲ့မော်ကွန်း။
၁၉။ ဥပကနှင့် ဆာဝါဟောစာ။
၂၀။ ဝိဇယ ပြဇာတ်။
၂၁။ ကောသလ ပြဇာတ်။
၂၂။ ပဒုမ ပြဇာတ်။
၂၃။ ဂင်္ဂါမာလဇာတ်(ခေါ်) ရေသည်ပြဇာတ်။
၂၄။ ကုသပြဇာတ် တပိုင်း။ (ရေးဆဲ)
၂၇။ အိမ်မှုတရား အဆုံးအဖြတ်များ၊ ဓမ္မသတ် လင်္ကာ (ရေးဆဲ)
၂၈။ သာသနာရောက် မင်းပြိုင်စာတမ်းနှင့်၊ သာသနာလျှောက်ကြီး။
၂၉။ ဆွမ်းတော်ကြီးတင် စာတမ်း။
၃၀။ စံကျောင်း ဆရာတော် ဦးစန္ဒိမာ ပြန်လွန်တော်မူရာတွင် ရေးသော ငိုချင်းရှည် ၄-ပုဒ်။
၃၁။ မန္တလေးတောင်ခြေ၊ ယာတော်ကြီးထွန်၊ ဖုန်းဘွဲ့ဗုံကြီးသံများ။
၃၅။ တောလား၊ ရေလား၊ သပြေလားများ။
၃၆။ သမိုင်း၊ ကျောက်စာသံပိုင်းများ။
၃၇။ ဧချင်း၊ တေးထပ်၊ သဖြန်၊ ဒွေးချိုး-လေးချိုးများ။
၃၈။ ရေသဘင် လူးတားများ။
၃၉။ ရေသဘင် ရတုများ။
၄၁။ မြမန်းစကြာ သင်္ဘောတော်နှင့် ဒူးရင်းတော်ဆက် နာဝါသံ (လှေတော်သံများ)
၄၂။ ရတနာနဒီမြစ်တော်၊ လှေချင်းတက်သံများ။
စသည့် လောကီ၊ လောကုတရာ စာများကို နောင်းလူတို့ အတွက် ရေးသားခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဦးပုည၏ ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ရသည်မှာ ဂျိမ်းစ် လှကျာ် ရေးသော မောင်ရင်မောင်၊ မမယ်မ ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုပင် ပြန်လည် သတိရမိပေသေးသည်။ ဦးပုညကို မြန်မာ-ရှတ်စပီးယား ဟု ပင် သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြချက်ကိုလည်း တွေ့ရဘူးပေသည်။ ဦးပုည သည် စာပေ၊ ကျမ်းဂန်များကို ပိုင်နိုင်လှပေသည်။ ပညာမာန်လည်း ကြီးသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ဦးပုည နှင့် ခောတ်ပြိုင် စာဆိုတော်တစ်ဦးမှာ အချုပ်တန်း ဆရာဖေ ပင်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 12:23 AM
စလေဦးပုည (အပိုင်း - ၂)
အပိုင်း-၁ မှာ တင်ခဲ့တဲ့ ပုံက ကိုယ်တိုင်ရိုက်လာတာမို့အဖြစ်ပါ။ ဒီပုံက သူများဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူရဲ့ လက်ရာမို့ပုံကောင်းပါ။ ဓါတ်ပုံကို တွဲးပြခြင်လို့ယူသုံးထားတာမို ခွင့်ပြုနိုင်ရင် ခွင့်ပြုဘို့ဒီနေရာက တောင်ပန်ပါတယ်နော်။
ဒါက ဦးပုည ငယ်စဉ် ရှင်ဝတ်စဉ်က နေထိုင်ခဲ့၊ စာကျက်ခဲ့တဲ့ စလေက ဘုန်းကြီးကျောင်းပုံပါ။ အတွင်းမှာတော့ အလင်ရောင်ဝင်စရာ လုံလောက်မူ မရှိလို့အတော်လေး မှောင်ပါတယ်။ ပုဂံခေတ်ကတည်းက စလေမြို့ ဟာ တည်ရှိခဲ့တာမို့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းဟာ ပုဂံခေတ်လက်ရာလို ယူဆစရာရှိပါတယ်။ အတိအကျတော့ မသိပါဘူး။
အမူထမ်း မောင်ချစ်တီး ဆိုသူက ဦပုည သည် ဗန်းမော်တိုက်တွင် ရှင်သာမဏေပြုနေကြောင်း လျှောက်ထားသဖြင့် ရှေ့ တော်သို့ ပင့်ရသည်။ မန္တလေးတောင် အရပ်တွင် မြို့ တည်လို၍ အခါပေးရန် ပြောဆိုရာ ၁၂၁၈-ခု တွင် မြို့ တည်ရန် နှင့် ဗေဒင် ကိန်းခန်းအရ အင်္ဂါနံ ညောင်ပင်များကို တံခါးဝ နှင့် လမ်းဆုံတို့ တွင် စိုက်လျှင် အောင်မြင်မည့်အကြောင်း အခါပေးဆက်လေသည်။ မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးတွင် ပြထားသော မြို့ နန်းတည်ရာတွင် အခါပေး ကြီးမှူးသူများ စာရင်တွင် မပါဝင်ဟုလည်း ဆိုသည်။ ( ဦးပုညသည် ဗေဒင်ပညာတတ်ကျွမ်း သဖြင့် ရှေ့ ကလည်း ရဟန်းဝတ်နှင့် ဒကာမတို့ဝင်ထွက် မေးမြန်းကြသဖြင့် ရဟန်ဒယကာက သင်ကာမကင်း၍ လူဝတ်လဲ ရသည်။ နောက်တွင်လည်း ထိုပညာရပ်နှင့်ပင် အသက် အန္တရာယ်ကြုံရလေသည်။ )
မင်းတုံးမင်းသည် မြောက်ဥယျာဉ်တော်တွင် ဝါသနာအလျှောက် အဂ္ဂိရတ်ထိုး ရာ မြို့ ဝန် ဦးသာအို က ရှင်ပုည သည် အဂ္ဂိရတ်တွင် များစွာကျွမ်းကျင်ကြောင်း လျှောက်သဖြင့် ရှေ့ တော်သို့ပင့်သဖြင့် ဦးပုညက အဂ္ဂိရတ်အကြောင်း နက်၊ နဲ၊ ဆစ်ပိုင်း ကျနစွာ လျှောက်လေသည်။ မင်းတရားကြီး က သင်္ကန်ဝတ်ဖြင့် နေသည်မှာ ဘယာကြောင့်လော၊ သဒ္ဒါကြောင့်လောဟု မေးလေသည်။ နှစ်မျိုးလုံးကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်လျှောက်ထားလေသည်။ ( ဦးပုညသည် လူဝတ်ကြောင်များနှင့် ပတ်သတ်သော ပညာများတွင် ပို၍ ကျွမ်းကျင်ကြောင်း တွေ့ နိုင်လေသည်။) များမကြာမီပင် လူထွက်လေသည်။
ထိုနောက် ကနောင်မင်းထံ ခစားရာ ကနောင်မင်း အလိုရှိ၍ သင်ဂြိုဟ် ကိုးပိုင်းသရုပ် တေးထပ်များကို ရေးသားဆက်သွင်းရသည်။ ၁၂၁၄-၁၅ ခု ယိုးဒယား ဇင်းမယ်ကို နိုင်သည့်အတွက် မင်းတရားကြီး အမိန့် အရ ယိုးဒယားနိုင် မော်ကွန်းကို ရေးသားရသည်။ နန်းတွင်းမိဘုရား အချို့အကျင့်ဖောက်ပြား ကြသဖြင့် တားမြစ်ရန် ဦးပုည ကို ပဒုမဇာတ်(ပဒုမ ပေါင်တို) ကို ရေးစေပြန်သည်။ တဖန် မိဘုရားတို့ ကလည်း မိန်းမမြတ် ဖြစ်သော မဒ္ဒီမိဘုရား ပါဝင်သည့် ဝေသန်တရာဇာတ်တော်ကို ရွှေ၊ ငွေ များစွာ ပေး၍ ရေးခိုင်းပြန်သည်။ နောက်တွင် မင်းသားအချို့ နှင့် မြင်ကွန်း၊ မြင်ခုံတိုင်မင်းသားတို့ဆိုးသွမ်းလွန်းသောကြောင့် ဆုံးမရန် ဝိဇယဇာတ်ကို ရေးရသည်။ ထိုမှ အစပြု၍ ရတု၊ ရကန်၊ ပြဇာတ်များကို သီးကုံးရေးသားကာ အမူထမ်းခဲ့ရသည်။( စလေဦးပုည သည် လက်ဖက်ရည်တော် ဆက်အဖြစ် မင်းတုံးမင်းထံတွင် ခစားရသည် ဟုလည်း ဖတ်ဖူးသည်။)
မန္တလေးမြို့နန်းတည်ပြီးသော် မင်းတုံးမင်းသည် သားတော် မလွန်မင်းသားအား အိမ်ရှေ့ စံပေးရန် စိတ်ကစားလေသည်။ ထုပ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသော်လည်း ကနောင် အိမ်ရှေ့ စံမင်းက ယုံမှားသံသယ ရှိပြီး ညီတော်၊ နောင်တော် စိတ်မကြည်လင်ဖြစ်ခါ မဝင်၊ မထွက်ဘဲ နေကြလေသည်။ မင်းကြီးခေါ်သော်လည်း ကနောင်မင်းသားက မကြွသဖြင့် မင်းသား ငယ်စဉ်ကပင် စောင့်ရှောက်၊ မွေးမြုရသော စကြာဒေဝီ မိဘုရားခေါင်ကြီးအား ဖြောင့်ဖြစေရသည်။ ကနောင်မင်းသားကြွလာသဖြင့် မင်းတုံးမင်းက သားဆိုသည်မှာ လိုသလောက်ရကြောင်း၊ ညီတော်က နောက်ထပ် မရနိုင်ကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ မိန့် လေသည်။ ( :D ) [မင်းတုံးမင်းလက်ထက် မင်းမူထမ်းတို့ သည် မိန်းမ (၂)ယောက်နှင့် အထက်တွင် ရှိသူများသဖြင့် လာဒ်စားကြလေသည်။]
ကနောင်မင်းသားလည်း စိတ်အေးငြိမ်း၍၊ မှားလေခြင်းဟု နောင်တရပြီးသကာလ (ကျွန်ုတို့ ရှစ်တန်း ကျောင်းစာ အဖြစ် သင်ယူခဲ့ရသော) ` ရေသည် ပြဇာတ်` ခေါ်`ဂင်္ဂါမာလဇာတ်တော်` ကို ဦးပုညအား ရေးသား တင်ဆက်စေလေသည်။ နှစ်သက်လွန်း၍၊ ဇာတ်တော်ကို ရှေ့ တော်တွင်လည်း ဖတ်ရ၍၊ ပြဇာတ်လည်း အကြိမ်ကြိမ် ကပြရလေသည်။
[မှတ်ချက်။ ။ စလေ ဦးပုညသည် ညာလက်က အင်္ဂါချို့ ယွင်းနေသော်လည်း (ညာလက်တဖက်လုံး သိမ်နေသည် ဆို၏) ရှင်ဘုရင်ရှေ့ တော်တွင် လက်ရေးမြန်၍ လက်ရေး၊ လက်သား လှပသေသပ်စွာ ရေးသားတင်သွင်း နိုင်လေသည်။ ရှင်ဘုရင်ရှေ့ တွင် ရေးသား ပေးဆက်ရသော ပေစာကို ခေါင်းထက်ထားပြီး ရှင်ဘုရင်ဘက် လှည့်ကာ လက်ယာလက်ပေါ်ပေစာတင်လျှက် လက်ဝဲလက်ဖြင့် ကညစ်ကိုကိုင်ပြီး လျှင်မြန်စွာ ရေသားဖော်ပြရသည်။]
မန္တလေးမြို့ ကို ၄-နှစ်ကြာ တည်ထောင်ပြီးနောက် မင်းတုံးမင်းက စလေဆရာဦးပုည အား မင်းလှ သင်္ခယာ ဟုသော ဘွဲ့ နှင့် ရွာစည်ရွာကို ပေးတော်မူသည်။ လစာငွေ တစ်နှစ် ၆၀၀-ကျပ်နှင့် အိမ်ဆောက်ရန် မြေနေရာလည်းပေးလေသည်။ ကိုယ်လက် အင်္ဂါချို့ ယွင်းနေသောကြောင့် မျိုးရိုး- သူကြီးရာထူး ရရန်ကိုကား မည်သူမှ လျှောက်ထားပေးခြင် မရှိပေ။ ၁၂၂၄-ခု တွင် အရှေ့ အရပ်မှစ၊ တောင်ဘက် သို့နန်းတော်ပတ်လည် မြောင်းတူး၍ ကျုံးတွင်းရေးသွင်းသော် ရတနာနဒီ မြစ်တော် မော်ကွန်းကို ဦးပုညက ရေးဆက်ရာ ဆုလာဒ် များစွာရလေသည်။ (ငယ်စဉ် မောင်ပုတ်စည် ဘဝမှပင်၊ ဆုတော်၊လာဒ်တော် အမျိုးမျိုးကို မင်းညီ၊ မင်းသား၊ မိဘုရားနှင့် ရှင်ဘုရင်တို့ ထံမှ ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ရဘူးသည်။)
မြင်ကွန်း၊ မြင်ခုန်တိုင်မင်းသားတို့ခေါ်၍ ဗေဒင်မေးသည်ကို ဟော၊ပြော သဖြင့် ကနောင်မင်းသားက မင်းမှလွဲးပြီး မင်းသားတို့ ထံတွင် မခစားရန် တားမြစ်လေသည်။ မင်းခစားဖြင့် ရိုးဖြောင့်စွာနေပါက ဘေးမဲ့ရစေမည်ဟု နောင်တော်ထံ လျှောက်တင်ပေးသည်။ ထိုနောက် ဦးပုညသည် အမျိုးမျိုးသော ကဗျာတို့ ကို ရေးသားစီရင်လေသည်။ ထိုသို့ နေစဉ် မြင်ကွန်း၊ မြင်ခုံတိုင်မင်းသားတို့ပုန်ကန်မူတွင် အခါပေးသောကြောင့် မင်းတုံးမင်းတရား အမျက်သင့် သဖြင့် မြို့ တော်ဝန် ဦးသာအိုးထံတွင် အကျယ်ချုပ်နှင့် အပ်ထား ခံရလေသည်။
ဒီပုံက စလေဦးပုညရဲ့လက်ရေးမူတွေ ထားတဲ့ ပြတိုက်ပုံပါ။
မြို့ ဝန်မင်း၏ မယားငယ်များသည် ဗေဒင်မေးရန်၊ တေးထပ်ရေးရန် ဦးပုညထံ မြို့ ဝန်မရှိခိုက် ဝင်ထွက်ကြသည်။ ပေး၊ ကျွေးကြသည် ဆိုပါသည်။ မြို့ဝန်းဦးသာအိုးသည် မိမိ မယားငယ်များ အချင်းချင်း ကုန်တိုက်သဖြင့် သတ်ရန် ကြံစည်သည် ဆိုပါသည်။ နောက် ၅-လ ကြာမှ မင်းတုံးမင်းက စိတ်ပြေသဖြင့် ဦးပုညကို လွှတ်ရန် မိန့် ရာ ဦးသာအိုးမှာ အမိန့် ဖြင့် သူခိုး၊ ဒမြ ဖမ်းရန်သွားနေသဖြင့် ဦးပုညကို ကြည်ညိုသော ဦးသာအိုး၏ မိန်းမများက လုပ်ကြံပြီးပုံ အလုံစုံကို ပြောကြားလေသည်။ နံနက် ညီလာခံတွင် မြို့ ဝန် ဦးသာအိုး က ဦးပုညကို သတ်ပစ်ကြောင်းပြောသော် မင်းကြီးက လူကို ခွေးသတ်လေပြီတကား-ဦးပုညကို ငါနှင့် ညီတော် ဘေးမဲ့ပေးပြီး ဖြစ်တယ်။ ဦးသာအိုးထံ အကျယ်ချုပ် ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ မောင်သာအိုးသည် အလွန် မိုက်သောသူ ဖြစ်လေသည်ဟု၍ နှမြောစွာ မိန့် လေသည်။ (ဖတ်မိသမျှကို ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ ထိခိုက်စေရန် ရည်ရွယ်ရင်း မရှိပါ။)
ဦးပုည၏ အထ္တုပ်ပတ်တိသည် ဒီမှာ ပြီးဆုံးသည်ဟု ထင်စရာ ရှိသော်လည်း ရတနာပုံ သတင်း အယ်ဒီတာ ဘိုးဝဇီရ ၏ ပြောကြားချက်နှင့် မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်း ဗြိတိသျှကိုလိုနီ အဖြစ် သိမ်းပိုက်ပြီးချိန်တွင် ရောက်ရှိလာသော `ဂျိမ်းဂျော့ စကော` သည် (စိန်ဂျွန်းကျောင်းတွင် ဆရာ နှင့် သတင်းထောက် အဖြစ် လုပ်ခဲ့ပြီး) `ရွှေရိုး` ကလောင်အမည်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သော The Burma, His Life and Notions စာအုပ်များကို ကိုးကား၍ ဦးပုညကို လုပ်ကြံသူမှာ ဦးသာအိုး မဟုပ်ဟုလည်း ဆိုပေသည်။ တဖန် သူရိယ မဂ္ဂဇင်းတွင် (အမျိုးသား တက္ကသိုလ်၊ ရာဇဝင် နှင့် မြန်မာစာပြ) ဆရာ ဦးသက်တင်က ထိုစဉ်က ဆရာဦးပုည မသေကြောင်း အကိုးအကား အတန်စုံစွာဖြင့် ရေသားထားချက်တို့ ကို နောက်တပိုင်းတွင် ဆက်လက် ဖော်ပြပေးပါမည်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 6:36 PM
စလေဦးပုည (အပိုင်း - ၁)
စလေဦးပုည အတ္ထုပ်ပတ္တိ အကျည်း
(ရှာဖွေ ဖတ်ရူ့ ရသော စာအုပ်များအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ မိမိဘာသာ ကောင်းနိုးရာကို ကိုးကား တည်းဖြတ်၊ ထုတ်နုတ်၍ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသဖြင့် တစုံတရာ မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများ ပါရှိခဲ့ပါက ထပ်မံ ရှာဖွေ လေ့လာရန်လို အပ်သော မိမိ၏ လိုအပ်မူ့ သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံအပ်ပါသည်။ )
ဦးပုညကို စလေမြို့ ၊ တိုက်စုရပ်တွင် ၁၁၇၄-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း ၁၃-ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့မွန်းတည့်ချိန်တွင် ဖခင် ဦးမြတ်စံ နှင့် မိခင် ဒေါ်လှရင်တို့ မှ ဖွားမြင်သည်။ ဖခင်မှာ မြို့စား၊ ရွာစားမျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်၍ ဟံသာဝတီမင်း၏ မင်္ဂလာအိမ်တော်တွင် အကြီးတော်အဖြစ်ဖြင့် ရေးသားအမူတော်ထမ်းသည်။ မိခင်မှာ စလေ-ပုခန်းငယ်၊ မြို့ သကြီးသမီး ဖြစ်သည်။ ဦးပုညတွင် မောင်လှိုင်း ဟုခေါ်သော ညီ တစ်ယောက်လည်း ရှိသည်။
ဦးပုည ဖွားမြင်သောနေ့ တွင် ဒုတိယ ကြက်သွန်းခင်း ဆရာတော် နှင့် မုံရွေး ဆရာတော် တို့ သည် ရွှေစက်တော်မှ အပြန်တွင် အိမ်သို့ ကြွလာကြသည်။ လက္ခဏာသွင်ပြင်ကို ကြည့်ပြီး ပညာရှိဖြစ်လိပ်မည်၊ လောကီရေးရာတွင် ကျော်စော ထင်ရှားလိပ်မည်။ ဗေဒင်အလိုအရ ဥပစ္ဆေဒကံ မကင်းတတ်သဖြင့် လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာပြီစေရန် ရဟန်ပြုသင့်ကြောင်း ဟောပြော၍ ပြန်ကြွသွားလေသည်။
မိဘတို့ သည် စလေမှ အမရပူရမြို့ ရှိ သာယာဝတီမင်း အိမ်တော်သို့အခစား ဝင်ရန် သွားသောအခါ နှစ် နှစ်သားအရွယ် ဦးပုည ကိုပါခေါ်သွားသည်။ အိမ်တော်ရှိ စည်ရုံးတွင် ခေတ္တ သွားရောက် ကြည့်ရူ့ ရာ ဦးပုည ဖြစ်လာမည့် ကလေးငယ်မှာ စည်ကြီးများကို ပုတ်ခတ် ကစားလေသည်။ သာယာဝတီမင်းက အမည် ပေး၊ မပေးပြီကို မေးလေရာ မပေးရသေးသဖြင့် စည်းပုတ် ကစားခြင်းသည် ကဗျာ လင်္ကာမှစ၊ ပညာလုံးစုံ တတ်မည့် နိမိတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မောင်ပုတ်စည် ဟု တွင်စေရန် အမည်ပေးလေသည်။
၆-နှစ် ရွယ်တွင် စလေမြို့တူမောင်း ဆရာတော် ဦးဒီပထံ တွင် ကျောင်းအပ်လေသည်။ ဤအသက် အရွယ်နှင့်ပင် ဓဇဂ်သုတ်ကို ပီပီသသ ရွတ်အံ ပြန်ဆိုနိုင်သည်။ ခုနှစ်၊ ရှစ်နှစ်သား အရွယ်တွင် သဒ္ဒါနှင့် အဘိဓမ္မာ သဂြိုဟ်ကျမ်းများကို သင်ကြားရလေသည်။ ထိုနောက် ဆရာတော် ပျံလွန်သဖြင့် ရှစ်လ စာဝါပျက်ပြန်သည်။ ခင်ကြီးစသည် လည်း ငယ်ဆရာ တစ်ပါးဖြစ်ပြီး၊ ကြီးဆရာများမှာ ဗန်းမော် ဆရာတော်၊ စလေ ခင်ကြီးသာ၊ ပုဂံရွှေကျောင်းနေ ဒလခင်ကြီးတို့ ဖြစ်သည်။ (ရှေးက ဘုန်းတော်ကြီးများကို ခင်ကြီး ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲးသည်။)
အသက် ၈-နှစ်တွင် သာယာဝတီမင်းက စေလွှတ်သဖြင့် ဗန်းမော်ဆရာတော်ထံ အပ်နှံရာ ရဟန်း ဝတ်စေသဖြင့် ရှင်ပုည ဘွဲ့ ဖြင့် သာမဏေဘဝတွင် သုတ်၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမ္မာကျမ်းများကို ပေါက်မြောက်အောင် သင်ယူစေလေသည်။ တဖန် ပိဋကတ်၊ ဗေဒင်၊ ကဗျာ၊ လင်္ကာရေး၊ တောလားရေးတို့ ကိုပါ သင်ကြား တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်လေသည်။ သာယာဝတီမင်း ရွှေဘိုကြွသောအခါ ဖခင် ဦးမြတ်စံသည် နောက်တော်ပါးမှ လိုက်ရင်း လမ်းခရီးတွင် တိုက်ခိုက်သူ ထူပြောသဖြင့် သရိုင်နယ်တွင် သေဆုံးသွားသည်။ မိခင်သည် ဖခင်ခရီးထွက်သဖြင့် စလေသို့ ပြန်ရာ၊ ရှင်ပုညမှာလည်း အမိနှင့် လိုက်၍ တူးမောင်းဆရာတော်၏ တပည့်များထံတွင် နေထိုင်လေသည်။ မိခင်မှာလည်း စလေရောက်ပြီး ၅-လ အကြာတွင် အနိစ္စရောက်သည်။ တဖန် အမရပူရမြို့ ၊ ဗန်မော်တိုက်သို့ကြွ၍ နေလေသည်။
ရှင်ပုညကို စလေ-ပုခန်းငယ် မြို့ နယ်နှစ်ခုကို အုပ်ချုပ်သော မြို့ အုပ်မင်းက ရဟန်းခံ၍ ရဟန်းပြုလေသည်။ ထိုစဉ် ဒယကာမများ အဝင်၊ အထွက်များသဖြင့် ရဟန်း ဒယကာက ယုံမှား သံသယ ဖြစ်သဖြင့် မြို့ အုပ်မင်းထံ မေတ္တာစာပို့ လေသည်။ ရဟန်းဘဝမှထွက်၍ ဟံသာဝတီမင်း နန်းတက်သော မင်းခစား ဖြစ်လာလေသည်။ တဖန် ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းကျောင်းတွင် ရှင်ဝတ်ပြန်လေသည်။ ဗဟန်းကျောင်းမှ ရဟန်း၊ သီလရှင်တို့ နှင့် မတည့်သဖြင့် အမရပူရ ဗန်းမော်တိုက်တွင် နေထိုင်လေသည်။
သာယာဝတီမင်း ကံတော်ကုန်သော်၊ ပုဂံမင်း နန်းတက်သော ကာလတွင် စလေ ဆရာဘုန်းကြီးကျောင်တွင် နေသည်။ နောင်သော် မင်းတုန်းမင်းနှင့် ကနောင်မင်းတို့ အိမ်တော်တွင် အမူတမ်းပြီး မိဘမျိုးရိုးဖြစ်သော မြို့ သူကြီးရာထူးကို ရရန် အားထုတ်ဆဲတွင် ဦးရီးတော်သူ မင်းကြီး ဦးပွှား ဆုံးပါးသဖြင့် ရာထူးကို မရတော့ပေ။ မင်းတုန်းမင်းနှင့် ကနောင်မင်းတို့နန်းတက်သော အချိန်တွင် ဗန်းမော်ကျောင်းတွင် ပုန်းအောင်နေထိုင်၍ ဗေဒင်၊ ရတု၊ ရကန် နှင့် ဆေးကျမ်းတို့ရေးနေလေသည်။
မင်းတုန်းမင်းသည် မန္တလေးအရပ်တွင် မြို့ တည်ရန် အခါပေးစေလိုသောကြောင့် ဦးပုညကို ရှာဖွေကြလေသည်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 2:22 AM
Today Trade Market Rates (Second Half of 21 June 2018)